Fursad Shaqo oo ka banaan Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Buslahada – Radio Muqdisho
Fursad Shaqo oo ka banaan Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Buslahada
Shuruudaha & Tixraaca
Wasaaradda: Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Buslahada
Waaxda: Maamulka & Maaliyadda
Jagada: Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda
Goobta Shaqada: Mogadishu, Soomaaliya
Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Buslahada ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxay xoojineysa hababka maareynta hay’adaha, maaliyadda iyo kheyraadka, qaab-dhismeedka maaliyadeed ee dowladda iyo nidaamyada bixinta adeegyada ee qaybaha caafimaadka.
Wasaaraddu waxay raadineysaa u tartamayaal/musharraxiin u qalma booska Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda. Ujeeddada loo xayeysiinayo booskan ayaa ah bixinta hoggaan, jihayn iyo maareynta Maamulka & Maaliyadda ee Wasaaradda iyo sidoo kale, hubinta adeegyada dhammaan howlaha maamulka oo ay ku jiraan maareynta shaqaalaha, miisaaniyadda, iyo tasiilaadka adeegyada kale ee maaliyaddeed. Booskan ayaa la filayaa inuu si firfircoon uga qaybqaato maamulka guud ee Wasaaradda, siinayana hagitaan iyo jiheyn ku aaddan horumarinta iyo hirgelinta hababka lagu horumarinayo hadafyada iyo istiraatiijiyadda Wasaaradda.
Baaxadda Shaqada & Waajibaadka:
Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda ayaa mas’uul ka ah jihaynta iyo maareynta maaliyadda & Adeegyada Maamulka ee Wasaaradda, isla markaana hubinaya bixinta adeegyada dhammaan howlaha maamulka oo ay ku jiraan maareynta shaqaalaha, miisaaniyadda, tasiilaadka iyo farsamada macluumaadka. Agaasimahu wuxuu qabanayaa shaqooyinka uu faro Agaasimaha Guud, wuxuuna mas’uul ka yahay dhammaan go’aannada waaweyn ee saameeya Agaasinka. Agaasimuhu wuxuu si firfircoon uga qayb qaadanayaa maamulka guud ee Wasaaradda isagoo bixinaya hagitaan iyo jiheyn ku aaddan hababka loo horumarin karo hirgelinta waajibaadka Wasaaradda iyo ujeeddooyinka istiraatiijiyadeed. La socoshada u hoggaansanaanta shuruudaha maareynta maaliyadeed ee Dowladda iyo Wasaaradda Caafimaadka. Waa in uu noqon karaa mid la jaanqaadi kara u hoggaansanaanta shuruudaha maareynta maaliyadeed ee dowladda iyo Wasaaradda Caafimaadka.
Waa inuu siiyo hoggaan wanaagsan oo xirfad leh shaqaalaha Maamulka & Maaliyadda, iyadoo la hubinayo in agaasinka uu taageero wax-ku-ool ah siiyo Wasaaradda;
Ka xubin ahaan kooxda sare maamulka iyo maareynta, waa inuu wax ku-biiriyaa maamulka Wasaaradda, isaga oo la imaanaya abuurista fikrado cusub iyo habab cusub oo ku saabsan sida Wasaaradda u maareyso hawladeeda;
Wuxuu u xilsaaranyaha mas’uuliyadda bixinta adeegyada maaliyadeed iyadoo la ilaalinayo isla xisaabtanka guud ee bixinta adeegyadaas;
Bixinta taageero farsamo ee maaliyadeed si Xisaabiyaha Barnaamijka Mashruuca Caafimaadka ee Wasaraadda Caafimaadku u yeesho awood uu ku fuliyo hawlaha mashruuca.
Siinta talo iyo taageero waaxyaha wasaaradda iyo sidoo kale barnaamijyada ka socda Wasaaradda ee la xiriira hormarinta maamulka & maaliyadda;
Taageeridda hirgelinta siyaasadda Caafimaad ee la xiriirta sinnaanta fursaddaha;
Waa inuu qabtaa shaqooqyinka kale ee uu u igmado Agaasimaha Guud;
Kormeeridda hawlaha maaliyadeed, xaqiijinta maamul wanaagga ee arrimaha maaliyadeed ee Wasaaradda; caawinta Agaasimaha Guud iyo Agaasimayaasha kale ee hababka miisaaniyadda iyo qorsheynta maaliyadeed; dabagalka iyo dib-u-eegista miisaaniyadda si waafaqsan codsiyada is-beddelaya iyo kuwa la sii saadaalinayo; iyo diyaarinta warbixinnada maaliyadeed ee sannadlaha ah;
Si wax ku ool ah u xaqiijin maareynta ku saabsan dakhliga iyo kharashka Machadka
Waa inuu siiyaa Agaasime Guud macluumaad sax ah, waqtiyaysan, lehna waxqabad cabbiraad ku saleysan
Maareynta dhammaan hawlaha bixinta iyo wax soo-iibsiga si waafaqsan tilmaamaha iyo sharciyada khuseeya.
Kormeeridda dhaqdhaqaaqa shaqaalaha, siinta Agaasimaha Guud talo ku saabsan arrimaha maamulka shaqaalaha, oo ay ku jirto horumarinta iyo dib-u-eegista siyaasadaha iyo habraacyada khuseeya maamulidda shaqaalaha;
Bixinta adeegyada kala duwan oo ay ku jiraan siinta shaqaalaha tababbarro iyo horumarinta maareynta waxqabadka; hababka isla-xisaabtanka, cabashooyinka; mushaaraadka iyo hawlgabka;
Hubinta in dhammaan siyaasadaha iyo habraacyada maamulka shaqalaaha ay buuxiyaan shuruudaha Wasaaradda;
Kormeeridda waaxda IT, ayadoo la hubinayo hawlaha socda iyo hirgelinta adeegyada Wasaaradda ee qeybta IT;
Maamulidda bilicda Xarumaha ay ku shaqeyso Wasaaradda;
Maamulidda wax-soo-iibsiga, adeegyada maareynta tasiilaadka oo ay ka mid yihiin cunto -karinta, nadiifinta, amniga, iyo ilaalinta dabka.
Fulinta hawlaha dheeraadka ah oo laga yaabo inuu u xilsaaro Agaasimaha Guudu ee Wasaaradda Caafimaadka ee Wasaaradda Caafimaadka, DFS.
Xulashadu waxay ku salaysantahay aqoonta iyo Qibradda u tartamaha/musharraxa u leeyahay booskan, ayadoo laga qaadayo imtixaan, wareysi fool-ka-fool ah. Ugu yaraan waa inuu leeyahay aqoon, waayo-aragnimo iyo xirfadahaan:
Shahaadada sare ee Masterka ee Maaliyadda, Xisaabaadka ama aqoon la xiriirta; (ii) Ugu yaraan waa inuu leeyahay 7 sano oo waayo-aragnimo shaqo xirfadeed taas oo 5 sano ka mid ah uu ka soo shaqeeyay shaqooyin dowladeed, (iii) waa inuu yahay shaqaale dawladeed oo yaqaan nidaamka xisaabaadka dawladda; (iv) Khibrad u leh maalgelinta iyo nidaamyada maareynta maaliyadda guud; (v) Leh xirfadaha abla-ableynta, ku wanaagsan wax-qorista, sidoo kalena leh si heer sare ah ugu hadli kara luuqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga; (vi) Ku wanaagsan xiriirka iyo is-dhexgalka, la macaamili kara dad badan, lehna xirfadaha wax-soo badhagista.(vii) leh qibrad la shaqeyn koox, sidoo kalena u gudan karo shaqadiisa si madax-bannaan asagoo ka maarmi kara kor joogtayn shaqo.
Waa faaido dheere ah qofkii heesto shahaadada CIPFA, UK. (chartered institute of public finance and accountancy.
Waqtiga & Goobta Shaqada:
Booskan waa mid joogto ah. Saacadaha shaqadu waa mid waafaqsan saacadaha dowladda ee shaqaalaha dowladdu ay ku shaqeeyaan.
Wasaaradda Caafimaadku waxay ku wargelinaysaa muwaadiniinta daneeynaaya fursaddan inay soo dalbadaan booskan ayagoo soo gudbisanaya araajidooda, sidoo kalena kusoo lifaaqaya codsiyada dalabka, isla markaasna ku caddeenayana inay u qalmaan codsashada fursaddan. Araajiyada & codsiyada waxaa lagu soo diri karaa ciwaannada hoos ku xusan.
Cidda loo qaadan doono booskan waxaa lagu xulan doonaa si waafaqsan Xeerarka Iibka ee dalka (procumbent).
Qofka loo qaadanayo booskan waa inuu bixin karaa talooyin wanaagsan oo ku salaysan falanqayn suuban
Leh hab-fikir sareeya/dheer
Ka qeyb qaadan kara go’aan-qaadashada
Leh xirfad Xiriir shaqo oo wanaagsan
Si heer sare ah ula shaqeyn kara dadka ay shaqo wadaag yihiin
Ku wanaagsan warbixin-qoraaleedka
Si wanaagsan qoraal & hadalba ugu fiican luuqadaha Ingiriiska iyo Soomaaliga
Habka soo gudbinta codsiyada iyo wakhtiga kama dambaysta ah
Daneeyeyaasha fursaddan shaqo waxaa laga rabaa inuu dira “codsi/ Arji, Taariikh nololeedkaada” dalabkaada waxaad ku diri kartaa ama ku gudbin kartaa qaab Emailka hoos ku qoran recruitment@ncsc.gov.so ama toos qofku u imaan karo xarunta Guddiga Shaqaalaha Rayidka, qaab email ahaan, laga bilaabo maalinta Khamiista 30th October –ilaa-ugu dambayn 12th November, 2021. 12:00 PM (Waqtiga Mogadishu) – adigoo isla markaas muujinaya ciwaanka ah “Application for Director of Finance and Admin, Ministry of Health-FGS”.
Emails/ Ciwaanka: recruitment@ncsc.gov.so
Xoghaynada Xafiiska Maamulka Gobolka Banaadir oo loo furay tababar
Madaxweynaha K/galbeed oo amray in la dardar geliyo howlgalada ka dhanka ah argagixisada+Sawirro